यज्ञवाल्क्य स्मृति : साम, दान, दण्ड र भेद कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्ने ? – उज्यालो खबर
शुक्रबार, चैत्र २७, २०७७ | ७:५९:४४ |
डा‍. प्रकाश ढकाल
याज्ञवल्क्य ऋषिद्वारा लिखित ग्रन्थ हो यज्ञवाल्क्य स्मृति । उक्त स्मृतिमा राजनीति, समाज र व्यक्तिको दैनिकीको बारेमा समेत विभिन्न सुझावहरु दिइएको छ । लोक उक्तिमा समेत चर्चित रहेको साम, दान, भेद र दण्डको नीति पनि यज्ञवाल्क्यले आफ्नो स्मृति ग्रन्थमा उल्लेख गरेका छन् । उनले यसलाई चार प्रकारको राजनीतिक उपायको रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।
कुनैपनि व्यक्ति आफ्नो शत्रु होस् या त प्रतिस्पर्धी । उसलाई आफ्नो वशमा राख्नको लागि कुन विधि अपनाउने त रु यस विषयमा यज्ञवाल्क्य भन्छन् ‘सबैभन्दा पहिले उसलाई बढाइचढाइ गरेर उसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ । यो नीतिलाई साम, आर्थिक प्रलोभन वा अन्य कुनै प्रलोभनमा पारेर राज गर्ने नीति दान, फुटाउ र राज गरको नीति दण्ड र उसको केही कमजोरीलाई टेकेर उसलाई दण्डित गरेर ऊमाथि राज गर्नु दण्ड नीति अनुसार पर्छ ।
राज्यको नेतृत्व गर्ने राजनेता होस् वा सानो कुनै संगठनको प्रमुख नै किन नहोस् । एउटै नेतृत्वमा बसिरहनको लागि कुनै पनि महत्वाकांक्षी व्यक्तिले अपनाउने नीति विशेषगरी यिनै ४ प्रकारको हो । राजकीय परम्परा एवं काम कारबाहीको यो उपायले अत्यन्त महत्व राख्छ । यी सबै नीतिहरु अमूर्त हुन्छन् । कुनैपनि कार्यको सफलताका निम्ति अपनाइने नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरको प्रयोग नै उपाय हो । उक्त ४ नीतिको संक्षिप्त व्याख्या यज्ञवाल्क्य स्मृति अनुसार तल गरिएको छ ।
साम कसैको स्तुति गाएर आफ्नो नाता सम्बन्ध वा कुनै कारणले आफूतर्फ आकृष्ट गराएर शत्रुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नु नै साम हो । यो उपाय अन्तर्गत प्रियवचन बोलेर मीठो तरिकाले फकाएर कसैलाई आफ्नो वशमा पारिन्छ । युद्धको स्थिति नै आइलागेको समयमा सकेसम्म त्यसलाई टार्नका लागि साम नीतिको अवलम्बन गर्नु राम्रो हुन्छ । यज्ञवाल्क्यका अनुसार यो सबैभन्दा पहिलो नीति हो । सकेसम्म यही नीति अरुमाथि कार्यान्वयन गर्नाले शान्तिपूर्ण हिसाबले कार्यसिद्धि हुने गर्छ ।
सामका पाँच प्रकार हुन्छन्
ती हुन् गुण संकीर्तन, सम्बन्धोपाख्यान, परस्परोपकारसन्दर्शन, आयति प्रदर्शन र आत्मोपनिधान ।
गुणसंकीर्तन — कसैको स्तुति गरेर, उसको गुणको चर्चा गरेर उसलाई आफ्नो बनाई नियन्त्रणमा राख्नु नै गुण संकीर्तन हो ।
सम्बन्धोपाख्यायन — आफ्नो पूर्खाको नाता सम्बन्ध देखाएर वा आफूले मित वा कुनै प्रकारको साइनो जोडेर विपक्षीसँग जोगिने प्रक्रिया सम्बन्धोपाख्यायन हो । नेपालमा मल्लकालमा राजा जयस्थिति मल्लले छोरी भृकुटीलाई तिब्बतका राजासँग विवाह गरिदिई आफ्नो छुट्टै सम्बन्ध कायम गरेका थिए । नेपालको एकीकरणका सवालमा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरका राजासँग मित लगाएरै काठमाडौं कब्जा गरेका थिए ।
परस्परोपकारसन्दर्शन — एक आपसमा सहयोगको लेनदेन गरेर सम्बन्ध राम्रो बनाउने प्रक्रिया परस्परोपकारसन्दर्शन हो ।
आयतिप्रदर्शन — आफ्नो शक्ति सामथ्र्यको हल्ला फिँजाएर अरुलाई सन्त्रस्त पार्दै आफ्नो पाशमा अल्झाइराख्ने सामथ्र्य आयतिप्रदर्शन हो ।
आत्मोपनिधान — आफू कमजोर भएको बुझेर विविध नाता सम्बन्ध तथा सम्पत्तिको प्रलोभनमा पारेर आफू मिल्न जानु नै आत्मोपनिधान हो । आत्मसमर्पण नै यसको स्वरूप हो । यसरी सामको विश्लेषण गरिएको छ । सहमति नै साम हो ।
कसैलाई सहयोग वा रकमले सन्तुष्ट बनाएर आफ्नो अनुकूल बनाउनु दान हो । धन, द्रव्य आदिले कसैको उपकार गर्नु नै दान हो ।
शत्रुहरूलाई एक आपसमा लडाउने सामथ्र्य राजामा हुनुपर्दछ । शत्रुहरूबीचको आपसी द्वन्द्वले पनि राजालाई फाइदा हुन्छ । शत्रुका मनमा डर उत्पन्न गराइदिनु नै भेद हो ।
कुनै पनि व्यक्ति वा समूह राजा वा शासकका विरुद्धमा रहन्छ भने त्यसलाई कुनै उपायद्वारा निर्मूल गर्नु राजकीय दायित्व हो । साम, दान र भेदले पनि उक्त समस्याको समाधान गर्न सकिएन भने दण्ड दिनैपर्ने हुन्छ । शत्रुलाई पराजित गर्नु राजाको प्रथम कर्तव्य हो । शत्रुलाई मारिदिनु, दुःख दिनु र धन खोस्नु नै दण्ड हो ।
यसरी राजाले चार प्रकारका उपायहरूको प्रयोग मार्फत् शत्रुक्षय गर्नुपर्दछ ।